Somali | For Fangers Pårørende
Marka uu qof qoyska ka mid ah xabsi ku jiro
Ururka qaraabada maxaabbiista (FFP) wuxuu u shaqeeyaa qoysaska/saaxiibbada dadka xiran. Waxaan og nahay in xabsigu noqon karo xaalad qoyska oo idil ku adag. FFP wuxuu bixin karaan warbixin ku saabsan xaaladaha xabsiga iyo xuquuqda qaraabada. Waxaan qaraabada talo ka siinnaa arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha, xaaladaha bulsho, codsiyada iyo cabashooyinka, iyo xaaladda qoyska iyo carruurta. FFP wuxuu carruurta, dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee uu qof xabsi uga jiro u qabataa qabanqaabooyin bulsho iyo kuwo dhaqan. Waxaan dadka ugu deeqnaa in uu la hadlo la-taliye iyo fursad ay kula kulmaan dad kale oo ku sugan xaalad tooda la mid ah. Turjubaan ayaan isticmaalnaa haddii taas loo baahdo. Deeqaha FFP oo idil waa bilaash.
Warbixinta xaaladda koroonaha oo afsoomaali ku qoran
Ururka qaraabada maxaabbiista (FFP) (Organisation for Families and Friends of Prisoners (FFP))
Ciwaanka boostada: Postboks 6710 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Ciwaanka booqashada: St. Olavs gate 21A, dabaqa 1-aad. Oslo. (Ballan horay u sii qabso!)
Taleefan: 22 11 41 30
Taleefanka gacanta: 979 66 199
Ciwaanka boostada- iyo kan booqashada: Kjøpmannsgata 23, 7010 Trondheim (Ballan horay u sii qabso!)